Qiimaha kaluunka ee Muqdisho oo hoos-u dhacay xilli lagu gudo jiro bad-xiranka (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qiimaha kaluunka ee Muqdisho oo hoos-u dhacay xilli lagu gudo jiro bad-xiranka (SAWIRO)
Waxaa suuqyadda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo kaluunka nuucyadiisa kala duwan, xilli lagu guda jiro waqtiga bad xiranka oo ay ragga jalaabta kaluunka ay ku adag tahay helidda kaluunka.
Suuqa weyn ee kaluunka oo ku yaalo degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho ayaa ah suuqa ugu weyn ee loo iib-geeyo kaluunka, waxaana suuqa laga dareemayaa mashquul aad u badan.
Mid ka mid ganacsatada kaluunka ku iibisa suuqa degmada X/weyne Mustaf Xaaji Makki ayaa sheegay in haatan hoos u dhac aad u weyn laga dareemayo sicirka uu iibinayo nuucyada kale duwan ee kaluunka, sida Jeedarka, Yuumbiga, Dhiiglowga, iyo nuuca la yiraah Seynab.
“Waxaa maanta kiiladii malaayga Yuumbiga la gadayaa $8, kiilada Seynabta ah 6$, Jeedarka waxaa lagadaa 5$, Daambariga waxaa la gadaa 4$, Yaxaaska waxaa la gadaa 2.5$, Qashaarka ama saafida waxa lagaa gadayaa $1- 1.5” Sidaas waxaa yiri Musta Xaaji Makki.
Waxa uu sidoo kale Makki sheegay in xilliga xagaaga kaluunka ahaan jiray mid aad u yar, taasi oo qiimihiisa ka dhigi jirtay mid qaali ah balse wuxuu farta ku fiiqay in xagaagaan uu ka duwan yahay kuwii hore islamarkaasna qiimaha kaluunku uu yahay mid hooseeya.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo la filaayay in sara u kac uu ku yimaado sicirka kaluunka waqtigani madaama lagu guda jiro xiligii bad-xiranka ayaa taas bedelkeeda waxaa muuqanaysa in kaluunka aysan jirin wax is-bedel ah oo ku yimid qiimihiisa caadiga ahaa.